ब्राजिलले चाख्यो कोरियाको लज्जास्पद गोल/ रोनाल्डोलाई पहेलो कार्ड/स्लोभाकियालाई धक्का |
ब्राजिलले चाख्यो कोरियाको लज्जास्पद गोल/ रोनाल्डोलाई पहेलो कार्ड/स्लोभाकियालाई धक्का
Posted on June 17, 2010 by Yonepal
विश्वकप फुटबल अन्तर्गत जुन १५ को खेल निकै सोचे विपरीत हुन पुग्यो। सो दिन भएको खेल न्युजिल्याण्ड र स्लोभाकिया, पोर्चुगल र आइभरिकोष्ट तथा ब्राजिल र उत्तरकोरियाबीच भएको खेल सोचेभन्दा अलि भिन्न हुन पुग्यो । फिफा बरियताको १०५ स्थानमा रहेको उत्तर कोरिया र १ नं.मा रहेको ब्राजिलबीचको खेलले झनै चकित लुल्यो । पोर्चुगल र आइभरिकोष्टबीचको खेलमा सर्वाधिक महंगा खेलाडी रोनाल्डोले पहेलो कार्ड पाए ।
ब्राजिलले चाख्यो कोरियाको लज्जास्पद गोल/ ब्राजिलकै कब्जामा जित
विश्वकप फुटबल २०१० को समुह ‘जी’मा रहेको ब्राजिल र उत्तर कोरियाबीच दक्षिण अफ्रीकाको इलिज पार्क स्टेडियममा भएको खेलमा ब्राजिलले उत्तरकोरियालाई दुई गोल चखाएको छ।
विश्वकप फुटबलको उपाधि ५ पटक उचालिसकेको ब्राजिल र विश्वकपमा सहभागी ३२ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा तल्लो बरियताको टिम उत्तर कोरियाबीच भएको खेलमा ब्राजिलले दुई गोल गरेको हो।
पहिलो हाल्फ दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेन। दबाबमा रहेको उत्तर कोरियाली खेलाडीले केही मौका पाए पनि गोल गर्न सकेनन्। पहिलो हाल्फमा निकै फितलो खेलेको ब्राजिलले दोस्रो हाल्फको सुरुदेखि नै निकै आक्रमक खेल्यो ।
ब्राजिलका जर्सी नं. २ का खेलाडी माइकनले खेलको ५५ औं मिनेटमा गोल गरेर ब्राजिललाई अग्रता दिलाए । उनी इन्टरमिलानबाट पनि खेल्ने गर्छन । त्यसको ६ मिनेटपछि ६१ औं मिनेटमा ६ नं.जर्सीका ब्राजिलियन खेलाडी बास्टोसले अर्को गोलपोष्टमा प्रहार गरे तर त्यो असफल भयो।
उत्तरकोरियालाई दोस्रो हाल्फको सुरु देखिनै निकै दबाबमा राखेको ब्राजिलले खेलको ७२ औं मिनेटमा अर्को गोल गर्‍यो। ब्राजिलका ७ नं.जर्सीका मिडफिल्डर इलानोले उत्कृष्ट गोल गरे । गोल गरेको एक मिनेटमै उनी खेलबाट बाहिरिए । उनको सट्टामा १३ नं.जर्सी खेलाडी एल्भेस मैदान छिरे ।
सोचेजस्तो खेल्न नसकेका ब्राजिलियन स्टार काका पनि खेलको ७८ औं मिनेटमा मैदानबाट बाहिरिए । उनको सट्टामा निलमार मैदान छिरे ।
खेल ब्राजिलकै दबाबमा रहँदा रहँदै पनि उत्तर कोरियाले चमत्कार नै गर्‍यो ब्राजिलको विरुद्ध एक गोल गरेर । खेलको ८९ औं मिनेटमा उत्तर कोरियाका जर्सी नं.८ का खेलाडी जी यून नामले ब्राजिललाई गोल गरेर हिरो नै बने ।
त्यसपछि कुनैतर्फबाट पनि गोल हुन सकेन । खेल ब्राजिलकै पक्षमा रह्यो। आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न नसकेको ब्राजिलले महत्वपूर्ण ३ अंक बटुलेको छ। खेलमा पहिलो गोल गर्ने ब्राजिलियन खेलाडी माइकन नै म्यान अफ दी म्याच भए ।
आइभरिकोष्ट र पोर्चुगलबीचको खेल बराबरी/ रोनाल्डोले पाए पहेलो कार्ड
विश्वकप फुटबलको दाबेदार राष्ट्र मानिएको पोर्चुगल र स्टार खेलाडी रहेको आइभरिकोष्टबीच भएको फुटबल प्रतियोगिता गोल रहित बराबरीमा सकिएको छ। दुवै राष्ट्रका खेलाडीले गोल गर्ने मौका पाए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्।
विश्वका चर्चित र महंगा खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डो रहेको पोर्चुगल र स्टार खेलाडी र धेरैले आशा गरेका डिडेइर ड्रोग्बा रहेको आइभरिकोष्टबीच भएको प्रतियोगिता निकै रोमाञ्चक थियो। खेल पण्डितहरुले ड्रोग्बाले राम्रो खेले आइभरिकोष्टले जित्ने भविष्यवाणी गरेको थिए । यद्यपि उनले राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि खेलमा कुनै गोल गर्न सकेनन्। चेल्सीमा रहेका आइभरिकोष्टका ११ नं.जर्सीका खेलाडी ड्रोग्बाले खेल अवधिभर कुनै चमत्कार गर्न भने सकेनन्। ६९ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी भएको उनले ४१ गोल गरेका छन्।
त्यस्तै निकै आशा गरिएका पोर्चुगलका ७ नं.जर्सीका खेलाडी रोनाल्डोले पनि खेलमा कुनै गोल गर्न सकेनन्। ७३ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी रोनाल्डोल मात्र २२ गोल गरेका छन्। यद्यपि उनले गोल गर्ने तीन मौका पाए पनि कुनैलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। उनको उत्कृष्ठ सुट गरे पनि आइभरिकोष्टका गोल रक्षकले त्यसलाई असफल पारि दिए । खेलामा राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि रियल म्याड्रीडका खेलाडी रोनाल्डोले एक पहेलो कार्डको सामना गर्नु पर्‍यो । उनले खेलको २१ औं मिनेटमा पहेलो कार्ड पाए । उत्कृष्ट खेलकै कारण उनी नै म्यान अफ दी म्याच भए ।
आइभरिकोष्टका दुई खेलाडीले पनि पहेलो कार्ड पाएका थिए । आइभरिकोष्टका ५ नं.जर्सीका खेलाडी जोकोरा र २० नं.का खेलाडी डेमेलले पहेलो कार्ड पाएका थिए । खेल दुवै पक्षबाट आक्रमक थियो।
तीन मिनेट समय बढाइए पनि दुवै पक्षबाट गोल हुन नसकेपछि अन्ततःखेल बराबरीमै सकियो । खेल दक्षिण अफ्रीकाको पोर्ट इलिजाबेथस्थित नेल्सन मण्डेला बे स्टेडियममा भएको थियो। बराबरी खेलेका दुवै राष्ट्रले एक/एक अंक बटुलेका छन्।
न्युजिल्याण्डले दियो स्लोभाकियालाई धक्का/ खेल बराबरीमै सकियो
दक्षिण अफ्रीकामा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको मंगलबार भएको ग्रुप एफ अन्तर्गत स्लोभाकिया र न्युजिल्याण्डबीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवैतर्फबाट एक/एक गोल भएको थियो।
निकै प्रयासहरु भए पनि पहिलो हाल्फमा कुनै गोल हुन सकेको थिएन ।
पहिलो हाल्फ दुवै तर्फबाट गोल हुन नकसे पनि दोस्रो हाल्फमा स्लोभाकियाका जर्सी नं. ११ का खेलाडी रोबर्ट भित्तेकले सिस्टेकको पासलाई हेडले गोलमा परिणत गरे । त्यसपछि न्युजिल्याण्ड केही दबाबमा रह्यो । तर खेलको अन्तिमतिर न्युजिल्याण्ड केही आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भयो । खेल स्लोभाकियाको पक्षमा जाने निश्चित भैसकेको थियो तर खेलमा तीन मिनेट लम्बियो । थपिएको तीन मिनेटलाई सदुपयोग गर्दै न्युजिल्याण्डका खेलाडीले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो।
खेल सकिन एक मिनेटमात्र बाँकी हुँदा न्युजिल्याण्डका जर्सी नं. ४ का खेलाडी विस्टन रेइडले गोल गरेर खेललाई बराबरीमा ल्याए । पहेलो कार्डको सामना गरेका उनले हेडबाट गोल गरेका हुन्।
न्युजिल्याण्डले दुई वटा र स्लोभाकियाले एउटा पहेलो कार्डको सामना गरे । खेल अवधिभर न्युजिल्याण्डले आठ पटक गोलपोष्टमा प्रहार गर्‍यो भने स्लोभाकियाले १३ पटक ।
स्लोभाकियाको पक्षमा गोल गरेका रोबर्ट भित्तेक नै म्यान आफ दी म्याच भए ।
बराबरी खेलेका न्यजिल्याण्ड र स्लोभाकियाले एक/एक अंक बटुलेका छन्। mr.deepakbasnet@ymail.com/15 June
« नेदरल्याण्ड र जापान विजयी, इटली- पाराग्वे बराबरी/आत्माघाती गोल गर्ने हाँसे/एसियाबाट अर्को मुलुको जित दक्षिण अफ्रीकालाई उरुग्वेको झड्का/स्पेनको गाँसमा ढुङ्गा/चिलीको जित »